Naya Post Nepal | बाहिरियो वर्षा सिवाकोटीको बिहेको भिडियो : विदाईमा रोएको भिडियो अहिले भाइरल, वर्षासहित आफन्तहरुको पनि च’ल्यो रु’वाबा’स (भिडियो)
बाहिरियो वर्षा सिवाकोटीको बिहेको भिडियो : विदाईमा रोएको भिडियो अहिले भाइरल, वर्षासहित आफन्तहरुको पनि च’ल्यो रु’वाबा’स (भिडियो)
अमेरिका जाँदै प्रेमीलाई भेट्दै आएकी नायिका वर्षा सिवाकोटी ले अन्तत सु’टुक्क प्रेमीसँग वि’बाह गरिन् । राज कटुवालसँग प्रेम सम्बनधमा रहेको केही समय च’र्चा चलेपछि वर्षा फे’री हरा इन् । राजसँगको बे्रेकअप लगत्तै अमेरिका हानिएकी वर्षाले प्रे मी आशिष गेलालसँग अमे’रिकाबाट फर्के लगत्तै ल’गनगाँ”ठो कसिन् ।
प्रेमी आशिष गेलालसँग झ्याप’झुप विबाह गरेकी वर्षाले किस्ता – किस्तामा बिहेका तस्वीर र भिडियो सामाजिक सं’जालमा अ’ पलोड गर्दै आफ्नो खुशी फ्यान र आफन्तहश्ररुका मा’फमा सा’ टिरहेकी छिन् ।
गो प्य राख्ने प्रयास गरिएको विवाहमा पारिवारिक स’दस्य, सीमित आफन्त र साथीहरु गरी करिब १ सय ५० जना सह भागी थिए ।
मेहेन्दी र विवाह समारोहमा खुसी देखिएकी वर्षा बिदाइमा भने रुँदै गरेका दृश्यहरु अहिले भाइरल ब’निरहेका छन् । वर्षा विदा ईमा धुरुधुरु रोएको भिडियो अहिले भाइरल बनिरहेको छ । व र्षाको बि’दाईका क्रममा आफन्त र परिवारले पनि आँशु खसा लेको सा’र्वजनिक भिडियोमा देख्न सकिन्छ
यो पनि ,,काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका इन्जिनियर तथा र्‍यापर बालेन शाहले आफू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको भोट काट्न उम्मेदवारी दिएको ब’ता एका छन् ।
राष्ट्रिय सभागृहमा पुगी मुख्य निर्वाचन अ’धिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि मिडियासँग कुराकानी गर्दै शाहले भने, ‘म भोट का’ट्न उठेको हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको भोट काट्न आएको हुँ । उनीहरूको भोट का’टेर म जि’त्न आए को हुँ ।’
एउटा स्व’तन्त्र तथा वै’कल्पिक शक्तिले अर्को यस्तै शक्तिलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनले जनाए । उनले एउटा वै’कल्पिक शक्तिले अर्को वै’कल्पिक शक्तिलाई स्वि’कार्नु पर्ने समेत बताए ।
‘वैकल्पिक शक्ति एउटा मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन । कतिपय वै’क ल्पिक शक्तिसँग हाम्रो सहकार्य भयो र कतिपयले मान्नु भएन । यो लो’कतान्त्रिक अभ्यास हो,’ उनले भने ।
शाहले काठमाडौंको मेयरमा आफूले ९० हजार ८३५ मतले जि’त्ने दा’बी दो’होर्‍याए । अघिल्लो पाँच वर्षको जस्तो दुःख नभोग्न मतदाताले आफूलाई मत दिनुपर्ने उनले जनाए । व्य वस्थापनको कमजोरीले गर्दा काठमाडौंका जनताले सुख पाउन नसकेको बुझाई उनको छ ।
‘युवा भएर मात्र भोट मागेका छैनौँ । दृष्टिकोण बनाएका छौं सोही अनुसार काम गर्छौँ भनेर भोट मागेका छौं,’ शाहले भने, ‘स्थानीय निर्वाचन निर्द’लीय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सि’द्धान्त हो ।’
मतदानअघि सक’भर काठमाडौंका सबै वडा र टोलमा पुग्ने आफ्नो कार्यक्रम रहेको उनले सुनाए । उनले प्रश्न गरे, ‘चुनाव अघि घरघर आउने मेयर चाहिएको हो की, पाँच वर्षसम्म घरघर आएर सेवा गर्ने मेयर चा’हिएको हो ? यो मतदाताले रोज्नुपर्छ ।’
काठमाडौं महानगरपालिका भित्र साढे दुई लाख घर रहेको र सकेसम्म सबै घरमा कुनै न कुनै माध्यमबाट पुग्ने प्रयास आ फूले गर्ने उनले जनाए । यो संगै क्याप्टेन विजय लामाले शाह को बारेमा ता’रिफ गर्दै केहि विचार सामा’जिक सं’जालमा राखे का छन् । उनले लेखेखेका छन्,
राष्ट्रले परिवर्तन मागेको छ । त्यो परिपुर्ति गर्न युवा पुस्ता पनि राजनितिमा होमिनु पर्ने अवस्था छ । बि’गतका चु’नावका छ” नोट को परिणामहरु प्रायः आम जनताका लागि नि’राशाजनकनै रहेको छ । सुन्दर सफा हुनुपर्ने काठमाडौं स’हर आज फो’हो रको डुङुरमा परि’णत भएको छ ।
न्युनतम पु’र्भाधार को अ’भाव र चरम अ’व्यवस्था छ् । यस्तो अवस्थमा राजधानी शहरको बागडोर सम्हाल्न एक का’बिल युवाको हैसियतले तपाईंले अफ्नो उम्मे’द्बारी पेश गर्नु भएको छ ।
मेरो तपाईं सित ब्यक्तिगत प’हिचान कुनै छैन । तर एक सचेत नगरवासिको नाताले सबै उमेदवारको बारेमा जानकारी राख्नु मेरो धर्महो झैं लागछ । तपाईं को बारेमा जति थाहा पाय त्यति प्रभावित भएको छु। तपाईंको घोषणापत्र पनि निकै ब्यवस्थित पाए ।
हुनुपर्ने र गर्न सकिने कुराहरु उल्लेखित रैछन। आफैँमा तपाई ईन्जिनियर भएको हुदा काठमाडौं सहरको गुमेको गौरव फर्का उन सकिने तपाईंको आत्मविश्वासको क’दर गर्छु ।
एक स्वतन्त्र उमेदवारको हैसियतले प्र’तिस्पर्धा गर्न पक्कै पनि सहज छैन । तर स’कारात्मक सोच , धृड आत्मबल स्पष्ट यो जना सहित अघि बढह्यो भने लक्ष अ’शम्भव छैन । कयौं देशमा राष्ट्र प्रमुखनै युवा पुस्ता छ्न ।
हाम्रो देशमा नगर प्रमुख एक युवा हुनु कुनै नौलो होइन । बरु अरु पार्टीहरुले पनि एक पटक युवा जनशक्तिमा बि’श्वास गर्दा कति राम्रो हुन्थ्यो। शुभकामना तपाइलाई!! जय चन्द्र सुर्य
२०७९ बैशाख १३, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 3600 Views